सैलुन खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नाई व्यवसायीद्धारा प्रर्दशन ! « MNTVONLINE.COM
सैलुन खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नाई व्यवसायीद्धारा प्रर्दशन !
काठमाडौँ । सैलुन खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नाई व्यवसायीहरुले प्रर्दशन गरेका छन् । संयुक्त नाई संघर्ष समितिको अगुवाइमा उनीहरुले ललितपुरको जावलाखेलदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा गुजारा चलाउने कठिनाइ भएको जनाउँदै तत्काल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
युनियनले प्रदर्शन गर्दै श्रमिकहरुको कम्तिमा पचास लाखको जीवन बीमा गर्न, निःशुल्क पीपीई सेट उपलब्ध गराउन, नाई श्रमिकहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्न, लकडाउन अवधिभर नाई श्रमिकहरुको बैंक ब्याज मिनहा गर्नलगायत माग गरेका छन् । योसँगै नाई श्रमिकहरुको ५० लाखको जीवन बिमा गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।